Harley Street News Archives - Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
Our Harley Street Clinic offers the safest method and currently the most effective laser hair removal procedures on the market today. At London Medical & ဗေဒဆေးခန်း, laser hair removal procedures are performed by the world leading technology –Cynosure Elite laser.
အလှကုန်သွားဘက်ဆိုင်ရာ Harley လမ်း
နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 22, 2020 အားဖြင့် Harley လမ်းဆေးခန်း
အပြုံးသည်သင်၏အလုံးစုံသောစရိုက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်လှပသောအပြုံးရလိုကြသည်. အလှကုန်ပစ္စည်းသည်သွားဆရာဝန်သည်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ် ဦး ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်. အလှကုန်သွားဆရာဝန်ကသင်မလိုပါကသင့်ကိုအံ့သြဖွယ်အပြုံးနှင့်လှပသောသွားများကိုပေးနိုင်သည်. ဒါကအံသွားလား, သွားကွာဟချက်, ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းနှင့်အရောင်ပြောင်းသွားခြင်း, သွားများကျိုးခြင်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်သွားဆရာဝန်မဖြစ်သည့်သင်၏သွားပြproblemsနာအားလုံးအတွက်ဖြေရှင်းနည်းရှိသည်. သွားနှင့်ခံတွင်းအင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်းသည်သင်၏မျက်နှာအလှအပကိုတိုးပွားစေသည့်ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုများဖြစ်သည်. သွားဘက်ဆိုင်ရာ implants များသည်သွားများနှင့်တံတားများကဲ့သို့သောအခြားရိုးရာကုသမှုများမှသွားများကိုကာကွယ်ရန်ပိုမိုထိရောက်ပြီးအစွမ်းထက်သည်. သွားအစားထိုး implants ၌တည်၏, သွားများကိုအတုသွားဖြင့်အစားထိုးသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်သဘာဝဖြစ်သည်. သွားကုသမှုများသည်အလွန်ထိရောက်သောကုသနည်းများဖြစ်သောကြောင့်လူကြိုက်များသောကုသမှုများဖြစ်လာသည်. ပျောက်ဆုံးနေသောသွားများသည်အလွန်ရှက်စရာကောင်းပြီးပြုံး။ စကားမပြောသရွေ့ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်. သွားအစားထိုးကုသမှုဆိုသည်မှာသွားများပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက်အလှကုန်ပစ္စည်းသွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုဖြစ်သည်. သွားများကို implants များတွင်အများအားဖြင့်တိုက်တေနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောပျော့ဖတ်များတွင်ထည့်ထားသည်. အစောပိုင်း, သွားများကို implants သတ္တုပစ္စည်းများဖြင့်သယ်ဆောင်။ လှပသောအပြုံးကိုပျက်စီးစေသည်. သို့သော်, advancement in dentistry has developed such materials which are not only natural looking but also prevent further teeth decay. With teeth implants, ကပ်သောသွားများကိုပျက်စီးခြင်းနှင့်ပုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ထားသည်. သွားအစားထိုးကုသမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့် Harley လမ်းရှိအလှကုန်ပစ္စည်းသွားဆရာဝန်တစ် ဦး နှင့်အတူထိုင်။ ပြုလုပ်သည်။ သို့သော်သင့်အလှကုန်သွားဆရာဝန်အားနောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးရန်အကြံပြုသည်။. Teeth’s whitening is another useful treatment in cosmetic dentistry. ဒီကုသမှုမှာသွားတွေအရောင်ပြောင်းသွားခြင်းဟာသူတို့ကိုအရောင်ချွတ်ပေးခြင်းဖြင့်သန့်စင်ပေးပါတယ်. အဆိုပါကုသမှုအတော်လေးထိရောက်သောဖြစ်ပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာနည်းနည်းအချိန်ယူပါတယ်. သွားတိုက်ခြင်းအတွက်သွားကုထုံးများကိုသွားဆရာဝန်ကအကြိမ်များစွာအကြံပြုသော်လည်းထိုသို့သောကုသမှုများသည်အမြန်ရလဒ်မဖြစ်စေပါ. အကျိုးအမြတ်ထက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသောလမ်းညွှန်မှုမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်သည်ကိုမသိဘဲအကြိမ်များစွာ. ထို့ကြောင့်သင်၏သွားနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများအတွက်အလှကုန်သွားဆရာဝန်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်ပြီးသူ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာလိုက်နာရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်. ကောင်းမွန်သောအလှကုန်ပစ္စည်းသွားဆရာဝန်ကသင့်အားအကောင်းဆုံးသွားကုသမှုကိုပေးလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်နာကျင်မှုကင်းဝေးလိမ့်မည်. Harley Street သည်အလှကုန်သွားအထူးကုဆရာ ၀ န်များနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်သူများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. Harley လမ်းသွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းတွင် (HSDC) အလှကုန်သွားကုထုံးအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. တည်နေရာ 103-106 Harley လမ်း, သင်၏ပြproblemနာအတွက်အမှန်တကယ်သက်ဆိုင်သောဖော်ရွေသောဝန်ထမ်းများနှင့်သင်တွေ့ဆုံပါလိမ့်မည်. Harley Street တွင်သင်သည်အခြားသွားဆေးခန်းများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်. သွားဖုံးပြproblemsနာများစွာရှိသည်; အလှကုန်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူမှုနည်းပါးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအကြိမ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်. လှပသောအပြုံးကိုလူတိုင်းကသတိပြုမိကြပြီး၎င်းသည်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်. ထို့ကြောင့်သင့်သွားနှင့်ဆိုင်သောပြproblemနာကိုဆွေးနွေးရန်ကျွမ်းကျင်သောအလှကုန်သွားဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
Mike သည်အတွေ့အကြုံရှိသောစာရေးဆရာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာ Cosmetic Dentist Harley Street တွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်, သွားဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်, နှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ implants.
ပိုမိုရှာဖွေပါ Harley လမ်းဆေးခန်းဆောင်းပါးများ